Isazi Semalt Esivela Ku-Islamabad Sichaza Okuthi Ugaxekile Kanjani Ugaxekile
I-blocker yogaxekile iyithuluzi eliphumelelayo lokubhekana nama-imeyili angafuneki. Lolu hlelo lokulwa nogaxekile luhlukile ezinhlelweni zokuhlunga ugaxekile oluvame ukusetshenziswa futhi luvimbela iningi logaxekile ngaphakathi kwemizuzwana. Ukusebenzisa ukuvinjelwa kogaxekile, ungakwazi ukuzivimbela kalula ekutholeni ama-imeyili angenalusizo nogaxekile. Ukuvinjwa kogaxekile kuvimbela u-85% wama-imeyili angafuneki ukufinyelela ebhokisini lemilayezo engenayo, kufaka phakathi amagciwane nemilayezo engenangqondo. Abanye abavimba nge-spam bangasusa ngisho no-99% wogaxekile ngaphakathi kwemizuzwana - kleiderboxen mit stangl.
Sohail U-Sadiq, isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , uchaza lapha ukuthi abasebenza kanjani abakwa-spam basebenza.
Isofthiwe ye-spam block namathuluzi isebenza ngama-akhawunti we-imeyli ye-mail, ehlola ama-imeyili we-imeyli ogaxekile. Abavimba begaxekile basuse kokubili ama-virus nama-imeyili asolisayo futhi bakusize ukuqeda izithombe nezithombe ezidala. Ngaphezu kwalokho, imilayezo ethathwa njengokungaqiniseki ihlukaniswa kalula, kufaka phakathi amaphephandaba amaningi kanye nama-imeyili wokuphromotha. Kuthatha izenzo ngokushesha ngokususa ama-imeyili, futhi lezi zenzo zigcinwa ukudala imithetho yokuhlunga okuguquguqukayo.
Yiziphi izici okufanele uzifune ku-Spam Blocker?
Uma kuziwa ekukhetheni abavimba be-spam, kufanele uhlale uhlola uhlelo oluhambisana kakhulu nensizakalo yakho ye-imeyili kunezinye izofthiwe ezifanayo. Futhi, kufanele ucabangele izici ezifana nokukhululeka kokufakwa, amazinga wokuvinjelwa anikeziwe, kanye nezindleko zezinhlelo ze-block spam..
Umehluko phakathi kwe-Spam Filter ne-Bloam yogaxekile
Isihlungi esigaxekile singahlela ama-imeyili amakwe njengogaxekile kumafolda athize, ngenkathi i-blocker yogaxekile ingakuvimbela ukuba uthole imilayezo engenamsebenzi nemifanekiso. Kusho ukuthi awudingi ukuchitha isikhathi ekususeni i-imeyli esolisayo njengoba zisuswa ngokuzenzakalelayo nabalandeli be-spam. Yingakho ngokuvamile kuvunyelwa abakwa-webmasters nabamabhizinisi abangafuni ukubhekana nabalingani be-spammeri nhlobo.
Izinzuzo zokufaka i-Spam Blocker
I-blocker yogaxekile kulula ukuyifaka, futhi akudingeki ushintshe izilungiselelo zayo ngokuphindaphindiwe. Ngaphezu kwalokho, kukuvumela ukuba ugcine amakheli e-imeyli akhona asindise unomphela. Njengoba kususa ugaxekile, i-blocker yogaxekile isindisa isikhathi sakho nokuvimbela ekusebenzelaneni nama-imeyili angafuneki. Ungabuye unciphise izingozi zegciwane futhi ungaphumelela impumelelo njengomuntu webhizinisi.
Iyini Intengo ye-Spam Blocker?
Abavimba be-spam badinga imali enkulu yenyanga. Izindleko zixhomeke ezingeni lokuvikelwa, izici zalo, nezakhiwo. Ngokwesilinganiso, i-blocker yogaxekile izokwenyuka okuthile kusuka ku-$ 3.00 kuya ku-$ 25 ngenyanga. Izindlu eziningi ze-software zinikeza izivivinyo zamahhala ukuvumela abasebenzisi ukulanda abavimba be-spam mahhala abanezici ezinqunyiwe nezinketho. Ungasebenzisa i-blocker yogaxekile yamahhala ezinsukwini eziyishumi nanhlanu kuya kwezinsuku ezingamashumi amathathu, emva kwalokho kuzodingeka ukhokhe imali.
Yini Okumele Uyihlole Kugaxekile Logaxekile?
Abavimba be-spam abahamba phambili bayokwenziwa ngokwezifiso ngabasebenzisi. Esinye sezici zayo eziyinhloko ikhono lokuvimbela nokuvimba ama-imeyili ogaxekile. Uma ukhethe i-blocker yogaxekile ethembisa ukuvimbela ama-imeyili angafuneki, wenze isinqumo esifanele. Qinisekisa ukuthi ihlangabezana nezidingo zakho futhi ihambisana nezicelo nezinsiza ozisebenzisayo.